Isi akwukwo nke ITIL - Isi ihe nke ITIL - akwukwo ulo akwukwo ya
ITIL Asambodo Isi - Isi ihe nke ITIL
Iwu ITIL isi
Kedu ihe bụ ITIL certific
Ibanye ndụ ndụ ITIL
ITIL Atụmatụ: Usoro, Ọrụ
Ihe Nkịtị nke Igodo: Atụmatụ Ọrụ
Ihe Nkịtị Ntuziaka: Nhazi Ụlọ Ọrụ
Ihe Nkịtị Ntugharị: Mgbasa Ozi
Akụkụ nke isi: Ịrụ Ọrụ
Ihe Nkịtị Ntughari: Mgbalite Ije Ozi na-aga n'ihu (CSI)
A na-ele akwụkwọ nke ITIL anya dị ka ihe a na-enweghị ike ịchọta na Nhazi Ọrụ Ntanetị kemgbe ọ na-ahụ site na otu ọkwá na ọkachamara. A na-ele ndị nwere asambodo a na njem ha anya dị ka ndị a pụrụ ịtụkwasị obi n'etiti ajụjụ ọnụ. Site na ITIL, òtù dị njikere ugbu a iji gosi ndị ahịa ha ezigbo ọrụ.
Ọdịdị ahụ na-asọpụta ọrụ ha ma dezie ntuziaka maka ọkachamara ọ bụla ị ga - eme. Tupu ịmalite ịmalite ịdị njikere iji nyocha akwụkwọ ndị ITIL, ọ na-eleba anya mara echiche dị iche iche, otu o si arụ ọrụ na ihe a tụkwasịrị obi nke onye ọ bụla ga-eme ka o jide n'aka.
ItIL na-anọgide maka Ụlọ Ọrụ Ịzụ Ihe Ịzụ Ihe ọmụma na usoro ahụ na-enye mmemme gosipụtara na-eji ya dịka akụkụ nke IT Management, ITSM na ọrụ dị iche iche nke bu n'obi inye ndị ahịa ha na ndị ahịa ọrụ dị mma. Isi ihe na-akwalite inweta asambodo bụ inye ndị otu otu ụzọ dị ike iji gbasaa ROI ma tinye usoro azụmahịa. A hụrụ onye maara nke ọma ka ọ bụrụ onye na-arụ ọrụ dị mma iji duga nzukọ ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Maka nkasi obi nke ndị ọkachamara na ndị ọrụ IT, a na-ewepụ ITIL n'ime klas ise dị ịrịba ama, iji kọwaa
Ụkpụrụ ọrụ ọrụ ITIL
Ntugharị ọrụ nke ITIL
Mgbasa Ntugharị ITIL
Mgbalite Ịmalite Ịrụ Ọrụ Na-aga n'ihu ITIL
N'ebe ahụ mgbe edozichara ihe ise ahụ niile, ha na-emetụta usoro ndụ ndụ ahụ ma na-ekewa ha na nhazi ọkwa ka ha nwee ike ịmekọrịta nnukwu ọrụ n'ime obere usoro. Ngalaba elu na-enyere ndị nnọchiteanya aka ịkọ ọrụ ma mezue ha n'otu ihe omume.
Akụkụ ise dị ịrịba ama nke ITIL na-agbanye n'ime usoro dị iche iche na mpaghara ikike dịka ọ bụla arịrịọ nke otu nzukọ. A na-ekewa ha n'ime ngalaba nchịkwa dị iche iche, dịka ọmụmaatụ, nlekọta arịrịọ, njikwa ikpebi, nnyefe na njikwa ihe omume na ihe omume n'etiti ọtụtụ ọkwa dịgasị iche iche.
A na-ekewa nke ọ bụla n'ime nchịkọta nhọrọ nke usoro ọkwa dị iche iche n'ime usoro ma ọ bụ ọrụ dị iche iche dịka atụmatụ nke ITIL.
Gụọ kwa: Inyocha Nyocha Foundation nke ITIL Gbaa ule ITIL maka ugwo maka ime
Okwu Mgbasa Ozi ahụ na-ezo aka na usoro onye ọkachamara nwere ike ịme iji mezuo usoro ndụ ndụ. Atụmatụ ọ bụla e kwesịrị iji dakọtara na ihe onye ahịa chọrọ na ihe mgbaru ọsọ ha ogologo oge.
Isi ihe dị na ya bụ iche iche na mpaghara dị iche iche.
Usoro nlekọta Pọtụfiti Ọrụ - Pọtụfoli na-arụ ọrụ na-akọwa maka ọrụ ọ bụla nke otu nzukọ nyere ma dịpụrụ iche n'ime ihe atọ dị ịrịba ama - pipeline ọrụ, ndenye ọrụ na ọrụ arụkwaghịm.
Nchịkwa Ntuziaka - Ọganihu na-achịkwa nghọta ihe onye ahịa chọrọ ma na-emetụta arịrịọ iji kwalite ihe ma ọ bụ ọrụ. Ịghọta onye ahịa ma na-agba ha ume ka ha zụta ihe na-esi n'aka,
Faịlụ profaịlụ - Categorizes ndị ahịa na akụkụ dịgasị iche iche ma ghọta ihe ndị ha chọrọ.
Ihe Nlereanya oru ngo - Ozugbo ndị ahịa na-enye iwu zuru oke, ọ bụ ohere dị ukwuu ịkọwa omume ha na otu ha si erite uru ọrụ iji kpalite arịrịọ.
Usoro nchịkwa ego - Usoro okwu nchịkọta na-ewere akụkụ dị nkpa na echiche nke a ebe otu nzukọ na-akwụ ụgwọ ha, na-eme atụmatụ ego maka ụgwọ ndị onye ahịa na-akwụ ma na-akwụ ndị ahịa ma ọ bụ ndị ahịa ụgwọ maka ọrụ na-akwụ ụgwọ dị mkpa inye nkwa ahụ ọrụ.
Ngwaọrụ ọrụ nwere ndụ ndụ ya nke ọma na ihe ndị dị adị bụ nke a maara dị ka Four Ps of Service design. Ha bụ,
Ndi mmadu - Ndi ochichi choro ime usoro
Usoro - Ọrụ nlekọta ọrụ dị mkpa maka arụmọrụ
Ihe - Ihe omimi ohuru na ihe eji acho achoro imecha ya
Ndị na - akwado - mmegbu ndị na - akwado, ndị na - apụ apụ na - achọrọ mgbe niile iji kwado ọrụ ndị nzukọ ahụ na - enweghị ike ime.
Ihe mgbaru ọsọ dị mkpa nke iji usoro mgbanwe ọrụ eme ihe bụ iji mezuo mgbe a na-arụ ọrụ ọhụrụ ma zigara azụmahịa IT, ha na-eme n'enweghị esemokwu na iwu ndị nzukọ ahụ setịpụrụ.
Onye ọ bụla n'ime ihe ndị ahụ na ọrụ ndị a na-agbakọta na-agbanwe na ụzọ onye ahịa nwere ike isi nweta ha. Ịgụ na inwe njikwa zuru oke maka uru, ọ bụ ngwa ma ọ bụ mmemme, ịnakwere ọrụ na ojiji.
Akụkụ dị iche iche na-aga n'okpuru ọkwa a gụnyere,
Njikwa na-arụ ọrụ (Nhazi atụmatụ na nkwado)
Ịkwụsị na nchịkọta ego
Nkwado ọrụ na ule
Njikwa Ọrụ na Nhazi Nhazi
Ọrụ Ịrụ Ọrụ bụ akụkụ ọzọ nke akwụkwọ ikikere ITIL na ọ na-agụnye usoro dị ukwuu nke ga-eme nke ọma iji wepụta ihe onye ahịa ahụ na-atụ anya ka ọ bụrụ ọrụ.
Na-agba ọsọ site na njikwa ihe omume, njikwa ihe omume iji lekọta ihe ize ndụ na akụkụ ọrụ nke ọrụ dị na ngalaba ọrụ ọrụ.
Ihe mgbaru ọsọ nke usoro ahụ bụ iji hụ na achọrọ ndị ahịa ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị, a na-edozi mmechuihu ọrụ na oge na arụ ọrụ oge ọ bụla ma ọ bụ ihe ọhụụ. Onye na-ebu sistemụ ahụ na-ahụ maka ịkwado ọrụ ọrụ dị irè na nke ziri ezi. Akuku dị iche iche nke ITIL Core component service incorporate bụ,
Na-achọ afọ ojuju
Njikwa ọrụ nke IT
Utu ikuku nke CSI bu ihe di iche. Ọ bụla nzukọ kwesịrị inweta site na ha anya na ike na àgwà ha. A ga-eji ozi na nkọwa site na oge gara aga iji mee ka usoro ndị ga-eme n'ọdịnihu maka nzukọ ahụ.
Mgbasaozi ozi na-aga n'ihu na-eme usoro ọhụụ, na-eme mkpebi dị mma iji belata nkọwapụta na akara ngosi na ijide ma na mgbakwunye ịzụta ndị ahịa ọhụrụ. Ọganihu dị iche iche na echiche ndị metụtara CSI bụ,
Idebe CSI Initiatives
Akwụkwọ ikikere ITIL bụ nchọpụta siri ike maka ndị bịara ọhụrụ ma maka onye nwere nkà nke rụzuru ọrụ na òtù IT maka ogologo oge nwere ike ịchọpụta echiche ndị na-achọghị nghọta. Ndị a bụ ihe ndị bụ isi na ngalaba dị iche iche nke ha na ITIL. Ihe nkenke iji nye gị ihe asambodo ahụ dị tupu i gosipụta maka ule iji mechie onye maara ihe. Mmetụta dị irè ga-adabere na ndị ọrụ na ndị ọrụ kachasị mma iji nweta gị maka òtù ha.
Inyocha Nyocha Foundation nke ITIL Gbaa ule ITIL maka ugwo maka ime